Messi oo markii lixaad ku guuleystay laacibka dunida. -
HomeciyaarahaMessi oo markii lixaad ku guuleystay laacibka dunida.
September 24, 2019 F.G ciyaaraha, Wararka 0
Ciyaaryahanka Kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guulaystay, ciyaartoyga ugu ragga ee billadda ay bixiso Fifa, taas oo lagu guddoonsiiyey Milan. Isaga oo ka qaaday ciyaartoyga reer Juventus ee Cristiano Ronaldo iyo ka Liverpool ee Virgil van Dijk.
waa markii lixaad ee Messi loogu codeeyo ciyaartoyga u fiican dunida.
tabbabaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa isna ku guulaystay tababaraha ugu fiican sannadka.
Klopp ayaa loo magacaabay billaddan iyaga oo ay labada tababare ee Horyaalka Ingiriiska wada joogaan. Waa tababaraha Manchester City Pep Guardiola iyo tababaraha Tottenham Mauricio Pochetttino.
kooxda Liverpool ayaa ku garaacday koobka Horyaallada Yurub ee Champions League, ciyaartii kamadambaysta ahayd ee June qabsoontay. Iyagoo sida kalena kaalinta labaad ka galay horyaalka ingiriiska xilli ciyaareedkii 2018-2019.
Kooxda Liverpool ayaa sidoo kale ku guulaystay lix ciyaarood xilli ciyaaredkan bilawga ah ee 2019-2020.
“Waxa ay ahayd sarrayn, qofna ma uusa fileyn labaatan sano, toban sano, shan sano, afar sano ka hor inaannu halkan soo istaagi doonno” ayuu Klopp.
Waan kuu ognahay, shaqadii wanaagsanayd ee qabatay adigu [Mauricio Pochettino] iyo weliba Pep. Waa inaan idin idhaahdaa Mahadsanidiin naadigaygii Liverpool’ ayuu kusii daray.
goolhayaha kooxda Liverpool Allison ayaa isna ku guulaystay oo qaatay billadda la siiyo goolhayaha ugu fiican. Isagoo billaddan kaga guulaystay goolhayaayaasha kooxaha Manchester City Ederson iyo goolhayaha kooxda Barcelona Marc-andre ter Stegen